Alakamisy 13 Jiona 2019. – FJKM
Alakamisy 13 Jiona 2019.
Fandalinana ny ASAN’APOSTOLY
Asan’ny Apostoly 16.16-40
Fanontaniana 3 no ndeha hosainintsika eto :
1-Hay ny fanahy maloto mahalala ny marina ?
Ahoana izany ? Izany no hitantsika eto , ilay fanahy maloto tao amin’ilay zazavavy no mampiteny azy hoe : « ireo lehilahy ireo dia mpanompon’ Andriamanitra avo indrindra , izay manoro anareo ny làlam-pamonjena » (and17). Marina ny zavatra nolazainy . Fa isika olombelona indray no jamba eo anoloan’ny fahamarinana mahavonjy .
2-Hay azo atao ny ho faly raha mijaly ?
Natao tao an-tranomaizina anatiny indrindra , rehefa avy nokapohina mafy dia mafy (and 23). I Paoly sy i Silasy sady «ny tongony nobolokoiny mafy tamin’ny boloky hazo» (and24) . Moa tsy fara-fijaliana izany ? Saingy , moa nimonomonona na nitaraindraina izy roalahy ? Tsia ! « Ary nony mamatonalina dia nivavaka sy hira fiderana an’ Andriamanitra i Paoly sy i Silasy » (and25). Ny mpino ihany no mahay izany .
3-Hay hain’ Andriamanitra tokoa ny mampiasa ny zavatra rehetra hanjary fitahiana ?
Ny tranomaizina nidiran-dry i Paoly dia nampodian’ny Tompo ho polipitra fitoriana ny famonjena .31 « Dia hoy izy roalahy : minoa an’i Jesoa Tompo dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao » . Dia nino tokoa ilay mpiandry tranomaizina dia voavonjy izy mianakavy .